တပ်မတော်နဲ့ KNU တပ်မဟာ (၁) တိုက်ပွဲဖြစ်
ကရင်ပြည်နယ် သထုံခရိုင်၊ ဘားအံမြို့ နယ်၊ ညောင်ကုန်းရွာသစ်အနီးမှာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA -တပ်မဟာ(၁) တို့ကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် အနီးနားက ကျေးရွာတွေက ရွာသားတွေ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို မအေးအေးမာက ပြောပြပေးပါမယ်။
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KNUရဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA -တပ်မဟာ(၁) တို့ ဟာ သထုံခရိုင် ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့က ပစ်ခတ်မူတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနီးနားကကျေးရွာတွေအထိ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံတွေ ကျရောက်တာကြောင့် ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရကြောင်း K. N. U. Concern Group က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောပြပါတယ်။
“အစက တော့ မြန်မာစစ်တပ်က တက်လာပြီး ကေအန်ယူရှေ့တန်း နယ်မြေမှာပစ်ခတ်မူတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရွာသားတွေက နေရာပြောင်းရွှေ့ရတယ်။”
ပစ်ခတ်မူအတွင်းမှာ နှစ်ဘက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က သေဆုံးမူတွေ ရှိတယ်လို့ ကေအန်ယူဘက်ကတော့ ပြောပါတယ်။ အလားတူပဲ တောင်ငူခရိုင် တပ်မဟာ (၂)နယ်မြေမှာလည်း လက်နက်ကျည်တွေ အနီးနားက ကျေးရွာတွေကို ကျရောက်တာတွေရှိပေမယ့် ကေအန်ယူဘက်ကတော့ အဲဒီဘက်မှာ ကေအန်ယူဘက်က ပစ်ခတ်တာတွေ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ မရှိတဲ့ရန်ကုန် မန္တလေးမြို့ ကြီးတွေမှာ ပစ်ခတ်တာတွေ ပိုလုပ်တာတွေရတယ်လို့လည်း နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောပါတယ်။
“ ကျမသုံးသပ်တာကတော့ လုပ်ချင်ရင်တော့ သူတို့လုပ်မှာပဲ ။ အခု က မြို့ ကြီးတွေမှာ ပစ်ခတ်နေတာက ပိုလုပ်နေတာက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေ မရှိတော့ အများကြီး လုပ်တာရှိတာပေါ့နော်။ တကယ်တော့ လူမဆန်တာမျိုးတွေ လုပ်တော့လူထု နစ်နာတာပေါ့ ။”
KNU ရဲ့ သတင်းစဉ်မှာတော့ မြန်မာစစ်တပ် ခလရ-၂၀၄ နဲ့ ၂၀၅ ပူးပေါင်းတပ်ရင်း ခမရ-၁၁၈ တပ်ရင်းတပ်မ ၄၄ ဌာနချုပ်အနီးက အမြှောက်တပ်ရင်း အလံတရာ လေ့ကျင့်ရေး(၉) တို့နဲ့ KNU တပ်မဟာ-၁ တို့ဟာအင်္ဂါနေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒီတိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် ဒီပစ်ခတ်မှု အတွင်းမှာ နယ်ခြားစောင့်စစ်တပ် BGF ကလည်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာစဈတပျနဲ့ KNUရဲ့ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော KNLA -တပျမဟာ(၁) တို့ ဟာ သထုံခရိုငျ ဘားအံမွို့နယျအတှငျးမှာအင်ျဂါနကေ့ ပဈခတျမူတှေ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး အနီးနားကကြေးရှာတှအေထိ လကျနကျကွီး ကညျြဆံတှေ ကရြောကျတာကွောငျ့ ဒသေခံတှေ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျရကွောငျး K. N. U. Concern Group က ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ နျောစီဖိုးရာစိနျက ပွောပွပါတယျ။
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာရမှု အခြေအနေ ကုလစိုးရိမ်
KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ကို KNU တိုက်ခိုက်
KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းဆန္ဒပြပွဲ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဝန်းရံပေးခဲ့